संघ – Page2– Tharuwan.com
कांग्रेसको खुलातर्फ केन्द्रीय सदस्यमा डा. गोपाल दहित र पद्मनारायण चौधरी निर्वाचित
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनअन्तर्गत खुलातर्फको मतगणना सकिएको छ। पार्टी कार्यालयमा सानेपामा आइतबार भएको अन्तिम मत परिणामअनुसार ३५ जना उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। महाधिवेशनमा खुलातर्फ ३५ सिटका लागि ९९ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो।
उमाकान्त चौधरी सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट सहमहामन्त्री पदमा उमाकान्त चौधरीको निर्वाचित भएका छन्। पार्टी कार्यालय सानेपामा भएको मतगणनामा उनी थारु कोटार्तफ निर्वाचित भएका हुन्। उनी शेरबहादुर देउवा प्यानलबाट उम्मेदवारी दिएका थिए।
कांग्रेस उपसभापतिमा विजयकुमार गच्छदार पराजित
नेपाली कांग्रेसको उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ विजयी भएका छन्। बुधबार राति केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सम्पन्न मतगणनामा सभापति शेरबहादुर देउवा समूहबाट खड्का र शेखर कोइरालाल समूहबाट गुरुङ निर्वाचित भएका हुन्।
डा. गोपाल दहितद्वारा खुलाबाट केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा डा. गोपाल दहितले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन्। उनले खुला पुरुषतर्फ उम्मेदवारी दिएका हुन्।
शान्ता चौधरी र भगवती चौधरी पनि खुला महिलातर्फ निर्विरोध
नेकपा एमालेको खुला महिलातर्फका ५३ जना केन्द्रीय सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। सुदूरपश्चिमकी अर्चना गहतराजले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि बाँकी उम्मेदवार सर्वसम्मत भएका हुन्। थारु समुदायबाट सुनसरीकी भगवती चौधरी र दाङकी शान्ता चौधरी निर्विरोध भएकी छन्।
एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ। महाधिवेशनको पूर्सन्ध्यामा कुन कुन थारु नेताहरु कुन पदमा आकांक्षी छन् भन्ने चर्चा चलिरहेको छ। एक थारु नेताका अनुसार करिब २३ सय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये थारु प्रतिनिधिको संख्या एकदमै न्युन रहेको छ।